About Zimbabwe Investment Authority - Pindula, Local Knowledge
Difference between revisions of "Zimbabwe Investment Authority"
Latest revision as of 07:55, 28 February 2021 (view source)
'''Zimbabwe Investment Authority''' is a corporate body responsible for promoting and facilitating both foreign direct investment and local investment. The institution was born out of the merger of the Export Processing Zones Authority (EPZA) and the Zimbabwe Investment Centre (ZIC) which was done to create a one stop Investment shop for quicker and easier facilitation of investment. The Zimbabwe Investment Authority's activities are guided by the Zimbabwe Investment Authority Act [Chapter 14:30].
'''Zimbabwe Investment Authority''' was a corporate body responsible for promoting and facilitating both foreign direct investment and local investment. The institution was born out of the merger of the Export Processing Zones Authority (EPZA) and the Zimbabwe Investment Centre (ZIC) which was done to create a one stop Investment shop for quicker and easier facilitation of investment. The Zimbabwe Investment Authority's activities are guided by the Zimbabwe Investment Authority Act [Chapter 14:30]. In February 2020 it was replaced by the [[Zimbabwe Investment and Development Agency]] (ZIDA).
The Zimbabwe Investment Authority has the following functions that guide it's day to day running;
Latest revision as of 07:55, 28 February 2021
Investment House 109, Rotten Row, Harare
Contact +263 4 757931-6, +263 4 759911-5, +263 4 780140-5
Zimbabwe Investment Authority was a corporate body responsible for promoting and facilitating both foreign direct investment and local investment. The institution was born out of the merger of the Export Processing Zones Authority (EPZA) and the Zimbabwe Investment Centre (ZIC) which was done to create a one stop Investment shop for quicker and easier facilitation of investment. The Zimbabwe Investment Authority's activities are guided by the Zimbabwe Investment Authority Act [Chapter 14:30]. In February 2020 it was replaced by the Zimbabwe Investment and Development Agency (ZIDA).
To promote and co-ordinate investment activities in enterprises or sectors of the economy which are of strategic importance to national development.
The Zimbabwe Investment Authority is made up of a Board of Directors and the Chief Executive Officer and the Management Team. The rest of the Zimbabwe Investment Authority Staff is spread across strategic areas of the authority's functions.
↑ , Zimbabwe Investment Authority, Zimbabwe Investment Authority, published: No Date Given, retrieved: June 21, 2016
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Zimbabwe_Investment_Authority&oldid=100143"
Last edited on 28 February 2021, at 07:55
This page was last edited on 28 February 2021, at 07:55.